SKU: 58652-20-3. Category: Hormones
Nomegestrol Acetate powder (19-Normegestrol powder) ejiriwo nke ọma mee ihe maka ọgwụgwọ ụfọdụ ọrịa gynecology (mgbarụ ahụ nke nwoke, nke dysmenorrhoea, ọrịa ịmịkọlọtọ) na dịka akụkụ nke HRT na estradiol maka enyemaka nke mgbaàmà ndị nwoke na nwanyị; a kwadoro ya na Europe dịka mgbochi maka ọgwụgwọ ọrịa menopausal, ọrịa na-arụ ọrụ uterine na manorrhagia, na njikọta na estrogen maka ọgwụgwọ nke mịnọpụ nke menopausal. Ihe ngosi vitioro na-egosi na Nomegestrol Acetate ntụpụ na-enye mmetụta bara uru nke estrogen; Ọzọkwa, Nomegestrol Acetate ntụ nwere nhepụiche ma ọ bụ mmetụta bara uru na profaịlụ lipid, ma ọ dịghị emetụta glucose metabolism ma ọ bụ buru ibu. Nomegestrol acetate ntụ ntụ egosiwo enweghị ọrụ profaịlụ na anụ ahụ na-egbuke egbuke, ọ dịghịkwa enwe mmetụta dị njọ na mgbatị ọkpụkpụ. Njirimara antigonadotropic ndị a, na njirimara ndị ọzọ bara uru na ọgwụ na-arụpụta, na-egosi na Nomegestrol Acetate ntụ ntụ nwere ike ịbụ usoro progestogen dị irè iji mee ihe na estrogen na ọgwụ estrogen / progestogen contraceptive treatment na HRT, ebe ọ na-enyekwa ụfọdụ uru ndị na-abụghị ihe mgbochi maka ahụ ike ụmụ nwanyị.
NOMAC bụ ọgwụ mgbochi ọnụ, nke a na-akpọkarị "Mkpụrụ Nchịkwa Nne" ma ọ bụ "Pill" nke edepụtara iji gbochie gị ịtụrụ ime.
Nomegestrol Acetate ntụ ntụ Ezi ntụziaka